Casa de Arroz | Indawo egqibeleleyo yesitidiyo seGadi #2 - I-Airbnb
Casa de Arroz | Indawo egqibeleleyo yesitidiyo seGadi #2
Iflethi eqeshisayo yonke sinombuki zindwendwe onguKatie & Happy
UKatie & Happy yi-Superhost
ICasa de Arroz inezixhobo ezigcwele ngokupheleleyo zestudiyo kwikhaya elinomtsalane lamaKoloniyali. Indawo efanelekileyo yokubalekela kwakho iTamarindo. Iibhloko ezi-3 nje ezimfutshane ukuya elunxwemeni kunye nebhloko enye ukuya kwiimarike ezinkulu kunye nobomi basebusuku, kodwa zithe ngcu kwisitrato esizolileyo kwaye singqongwe zizilwanyana zasendle ezikhethekileyo zaseCosta Rica!
Ungalubona lonke udweliso kunye nophononongo lweCasa de Arroz apha: www.airbnb.com/users/31112260/listings?user_id=31112260&s=50
Le ndlu ibekwe ngokugqibeleleyo kwiholide yakho yaseTamarindo. ICasa de Arroz yenye yamakhaya anesitayile sakudala saseTamarindo kwaye ibekwe kwindawo efanelekileyo kumgama oziimitha ezingama-300 (iibhloko ezi-3) elunxwemeni kwaye inyathelo elikude kwiivenkile zegrosari, iindawo zokutyela kunye nobomi basebusuku !! Amagumbi ethu abekwe embindini kangangokuba akukho mfuneko yamoto yokurenta. Ngokuqinisekileyo yonke into kukuhamba nje okufutshane! Sikwanazo neebhayisekile ze-beach cruiser ezifumanekayo kwisiseko sokuza kuqala ukuba ufuna ukuhlola idolophu ngamavili ama-2! Eyona ndawo ingcono yendlu yethu yeyokuba ithe nca kwinduli encinci ekupheleni kwesitrato esithe cwaka, kude nje ngokwaneleyo kude nentshukumo yedolophu. Iyadi yethu inemithi ezele ziinkawu, ii-iguana, iingcungcu kunye namabhabhathane. Siyabathanda abahlobo bethu bezinkawu kodwa silunyukiswe, loo ngxolo ivakala ngathi yeyengonyama…iphuma kubo!
ICasa de Arroz yenye yezindlu zantlandlolo zikaTamarindo ezinezindlu ezi-4 ezisanda kuhlaziywa. Sikunika yonke into oyifunayo kuhambo olufutshane okanye ukuhlala ixesha elide. Iyunithi nganye inomqamelo-phezulu ibhedi yobukhulu bukakumkanikazi, kunye nebhedi ye-futon epheleleyo. Oku kubenza balungele abahlobo abahamba kunye okanye iintsapho ezincinci. Yonke indlu ine-AC, amanzi ashushu, i-WIFI, i-fan yesilingi, iitawuli zaselwandle kunye nezitulo, indawo epholileyo, indawo yokutya ezimbini, kunye nesefu. Esi situdiyo sikumgangatho ophantsi ngokufikelela ngokulula kwindawo yegadi eneBarbecue enkulu kunye netafile yesidlo sangokuhlwa kunye nefenitshala yepatio yokuphumla kuyo.
Jonga ukutya kwasekhaya, kubandakanya imveliso yetropikhi, kwaye ube nobubele kuhlahlo lwabiwo-mali lwakho ngokuthatha ithuba lekhitshi elixhotyiswe ngokupheleleyo. Uzakufumana yonke into oyifunayo ukupheka ngefriji enesayizi epheleleyo, isitovu esine-oveni, izitya, iimbiza & neepani kunye nesiselo kunye nesidlo sangokuhlwa sesi-4. Sibeka ikhitshi ngalinye ngezinto ezisisiseko zokupheka, kubandakanya ityuwa, ipepile, ioyile. , iswekile, iti, kunye nekofu emnandi yaseCosta Rican. Sikwanayo nendawo ye-BBQ, eyona ndawo ibalaseleyo yokosa ukutya kwaselwandle okusandula ukubanjiswa kunye nokutya i-alfresco. Okanye phumla kwaye ujabulele umthunzi opholileyo kwenye yee-hammocks ezenziwe ekuhlaleni.
ECasa de Arroz sihlala sibonelela ngenkonzo yokucoca yonke imihla, nangona kunjalo, ngenxa ye-Covid sicoca kuphela ngexesha lokuhlala kwakho xa usicela. Sizama ukuqaphela kakhulu okusingqongileyo kunye nokunqongophala kwamanzi kwangoku ukuze iitawuli ezintsha kunye namaphepha acocekileyo abonelelwe kabini ngeveki. Sineendawo zokuhlambela kwipropati ukuba wamkelekile ukuba usebenzise lula yakho (i-$2 ngomthwalo ngamnye ibandakanya isepha). Nceda usincede silondoloze amandla ngokubukela ukusetyenziswa kwamanzi kunye nokucima iiyunithi ze-AC xa zingasetyenziswa.
4.92 out of 5 stars from 403 reviews
4.92 · Izimvo eziyi-403
Bonisa iingxelo zokuhlola eziyi403
ITamarindo yidolophu eyonwabisayo yokusefa eneendawo zokutyela ezininzi kunye nobomi basebusuku onokukhetha kuzo. Ulwandle lwethu lolona lude, ulwandle oluhle kakhulu eCosta Rica kwaye lufanelekile kuhambo lwaselwandle. Ikwabekwe kufutshane nezinye iindawo zekhefu lokusefa nto leyo eyenza ibe liziko elikhulu ukuba ukwiholide yokusefa. UTamarindo unento encinci kuye wonke umntu ngoko ke lolona khetho lufanelekileyo kuhambo lwakho lwaseCosta Rican.
ICasa de Arroz ikwiimitha ezili-150 (iibhloko ezi-1.5) ukusuka kumbindi wedolophu kodwa kwisitalato esifileyo phezulu kwinduli encinci. Indlu ngokwayo ijikelezwe yihlathi elitshisayo, elidala umoya ozolileyo nowokuphumla.
Umbuki zindwendwe ngu- Katie & Happy
Izimvo eziyi-1 431
Sihlala kwipropathi kodwa sahlukile kwindawo yeendwendwe. Siyafumaneka ukuba ufuna uncedo okanye iingcebiso zethu kodwa siyathanda ukuhlonipha ubumfihlo bondwendwe lwethu. Nokuba ufuna isithuthi esisuka kwisikhululo seenqwelomoya okanye unomdla kukhenketho okanye izifundo zokusefa, singakunceda ukubhukisha zonke. Siza kukuthumelela uluhlu lwemisebenzi ekhoyo kunye nesiqinisekiso sokubhukisha kwakho ukuze uqalise ukucwangcisa. Ekubeni sihleli eTamarindo iminyaka emininzi kwaye sisebenza kushishino lwezokhenketho lwasekhaya, siyakuvuyela ukukunceda wenze eli phupha lakho libe yiholide.
Sinazo izilwanyana zasekhaya (izinja ezi-2 & neekati ezi-3), nangona zingenakho ukufikelela rhoqo kwindawo yeendwendwe. Kodwa, ukuba uphoswa ngabahlobo bakho abanoboya wamkelekile ukuba udlale nezethu!
Sihlala kwipropathi kodwa sahlukile kwindawo yeendwendwe. Siyafumaneka ukuba ufuna uncedo okanye iingcebiso zethu kodwa siyathanda ukuhlonipha ubumfihlo bondwendwe lwethu. Nokuba u…
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Tamarindo